Manao Fanairana Ny Mpikatroka Syriana Noho ny Vono Olona Mety Hitranga Ao Amin’ny Fonja Hama · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2016 7:02 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Italiano, عربي, Español, English
Vonjeo ireo gadra ao amin'ny fonja Hama. Sary: @luna_alabdalla (Twitter)
Gadra maherin'ny 800 izay gadra politika ny ankamaroany no heverina fa ao anatin'ny toe-javatra mampidi-doza taorian'ny fikomiana tao amin'ny Fonjaben'i Hama, avaratry ny renivohitra Damaskosy izay manohitra ny famindrana ireo dimy voafonja, voaheloka ho faty, any amin'ny toeran-kafa ao amin'ny fonja malazan'ny Miaramila Sednaya. Nokarakaraina ihany koa ny fikomiana mba hitakiana ny hisian'ny fitsarana sy ny fepetra tsara kokoa ao am-ponja.
Rehefa naka ireo mpiambina ny fonja ho takalon'aina ireo gadra, nohodidinin'ny tafiky ny fitondrana ny fonja, no sady mitifitra amin'ny bala tena izy, baomba solika sy entona mandatsa-dranomaso eo amin'ny toerana feno olona. Nilaza ny mpikatroka fa tsy misy herinaratra sy rano ny fonja nandritra ny efatra andro ary misy ny porofo tsy mitsaha-mitombo fa mety hisy ny famonoana ireo gadra, izay efa miaina ao anatin'ny fepetra ratsy sy iharan'ny fanitsakitsahana tafahoatra amin'ny zon'olombelona.
Niharatsy ny fifandonana nanomboka tamin'ny Alatsinainy, ary efa manao fanairana amin'ny aterineto ny mpikatroka, mizara lahatsary nalefan'ireo gadra tao amin'ny media sosialy, mampiseho ny fihitaran'ny krizy ankehitriny. Nivezivezy ihany koa ireo sary ahitana ny tafiky ny fitondrana mivonona hanafika ny fonja.
Sary voalohany nalefa misy ireo gadra mikomy ao amin'ny Fonjaben'i Hama mihodidina ny Toerana
Sarin'ireo gadra ao amin'ny fonjaben'i Hama miezaka manosika ny vavahady lehibe mihidy gadena.
Tao amin'ny Twitter, nizara ity sary avy ao amin'ny fonjan'i Hama ity i Luna Watfa ary nitatitra hoe:
Gadra 800 no voafandrika tao anatin'ny fonjaben'i Hama, fandrahonana vono olona mety hitranga ao.
Nilaza i Abdalaziz Alhamza fa gadra roa no maty nisy namono:
Mahatsiravina ny toe-draharaha ao amin'ny fonjan'i Hama, gadra roa no namoy ny ainy, hanatanteraka vono olona hafa ao indray ny fitondrana Syriana
Nizara ny fahoriana mahazo azy ireo gadra ao anatin'ny fonja, ary miantso ireo vondrona mpiaro ny zon'olombelona mba hirotsaka an-tsehatra hanakana izay mety ho famonoana. Tao amin'ny haino aman-jery sosialy, namoaka izao fanambarana manaraka izao tao amin'ny pejin'izy ireo ny mpikatroka Syriana mba hanasongadina ny manjò ireo gadra;
Izahay dia Syriana mpikatroka manitatra tsy misy fanavakavahana ity antso vonjy ity amin'ny mpiaro ny zon'olombelona, ny fikambanana mpanao asa soa sy ny Fikambanan'ny Vokovoko Mena sy Volatsinana Mena mba hangataka fanampiana ho an'ireo gadra politika ao amin'ny Fonjaben'i Hama, rehefa avy nanatontosa fihetsiketsehana manohitra ny fitsarana tsy amin'ny antony iaretan'ireo gadra izy ireo, izay nitarika ny fahavononan'ny fitondrana Syriana hanatanteraka fanamelohana ho faty ho an'ny maro amin'izy ireo. Rehefa tsy nahomby tamin'ny fanatsarana ny fepetra any am-ponja ny fifampiraharahana tamin'ny fitondrana, nomena fe-potoana hatramin'ny 5 (ora ao Damaskosy) ireo voafonja mba hanala ny fanidiana azy ireo. Raha toa ka tsy manaja ity fandrahonana ity ireo gadra, dia hanafika ny fonja amin'ny alalan'ny bemidin'ny miaramila ny fitondrana Syriana izay atahorana hiteraka vono olona mahatsiravina eo amin'ireo gadra.
Miantso ny fikambanana iraisam-pirenena rehetra izahay mba hirotsaka an-tsehatra hanakana ny vono olona efa antomotra ao anatin'ny ora maromaro ary izany dia noho ny fitakian'ireo gadra, izay miantso ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba handray ny andraikiny feno hanakanana ny fitondrana Syriana amin'izay hetsika famaizana ataony amin'ireo gadra.
Tompon'andraikitra amin'ny vono olona, izay atahorana ataon'ny fitondrana ao amin'ny fonja ny fiarahamonina iraisam-pirenena sy ny fikambanana mpiaro ny zon'olombelona.
Avy ao anatin'ny fonja Hama, mizara ity antso ity ao amin'ny YouTube ny gadra iray, izay milaza fa tsy nahazo sakafo nandritra ny telo andro ireo gadra:
Araka ny filazan'ny pejy Facebook gadra ao amin'ny fonjaben'i Hama, an-dalana ny fifanarahana atao amin'ny fitondrana mba hamerina ny tolotra toy ny rano sy ny fanomezan-tsakafo sy ny fanafody ao am-ponja. Ho takalon'izany, tsy maintsy mitsahatra ny fikomiana.
Syriana an'arivony no nampidirina am-ponja tsy misy fiampangana ary iharan'ny fampijaliana hatramin'ny nanombohan'ny fihetsiketseha-panoherana ny fitondrana nipoaka manerana ny firenena tamin'ny volana Martsa 2011. Ary Syriana maherin'ny 270.000 no namoy ny ainy tao anatin'ny dimy taonan'ny ady ao Syria.
Aza misaraka aminay raha hanaraka ny vaovao farany.